Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Samaynta shirkad ganacsi > Qorshaha waxqabadka ganacsiga
Qorshaha waxqabadka ganacsiga waxaad uga fakaraysaa waxyaabaha aad aqoonta fiican u leedahay iyo waxyaabaha aad ku liidatid, waxaad kaloo qorshaha ku caddaynaysaa badeecadda ama adeegga aad ka ganacsanaysid siday yihiin. Ka fakar dadka macaamiisha kuu noqonaya iyo waxyaabaha ay macaamiishu u baahan yihiin. Sidoo kale ka fakar waa kuwoma ganacsatada kula tartamaysaa, waa maxay ay ka ganacsanayaan iyo qaababka ay u shaqeeyaan ama u ganacsadaan.
Qorshaha waxqabadka ganacsiga waxaa xudun u ah qorshaha waxqabadka ee shirkadaada. Si taxadar leh uga fakar, qaabaka ay shirkadaadu u shaqaynayso iyo sidoo kale waa xagee waana sidhee dhismaha shirkadaadu ay ku shaqaynayso, waa maxay qalabka wax soo saarka ama shaqaalaha aad u baahan tahay, xayaysiis sidee ah baad isticimaalaysaa, si aad iibkaaga u kordhiso, sidoo kale sii ogow, in caymiskaagu daboolayo khasaarooyinka ka imaan kara hawlaha ganacsiga, inuu debbero khasaaraha ganacsiga ka imaan kara. Sida loo qabanqaabinayo qoritaanka kharashka iyo dakhliga shirkadda, qorshaha dhaqaalaha iyo sida loola soconayo inuu qorshuhu sidii loogu talagalay u fuley, waa inay ku qornaadaan qorshaha waxqabadka ganacsiga.
Sidoo kale waa inaad ku sheegtaa qorshaha shaqada ganacsiga, sida aad doonaysid inaad u samaysid xisaabaadka iyo qorshaynta dhaqaalaha aandna ula soconaysid hirgelida qorsheyaalkaaga.
Cawinaad ah xagga samaynta qorshaha waxqabadka ganacsiga
Waxaad talooyin faah-faahsan oo la xiriira samaynta qorshaha shaqada ganacsiga ka helaysaa xarunta la talinta shirkadaha. Xarumahaas boggagooda internetka waxaad ka koobiyeysan kartaa talooyin oo ganacsadayaasha loogu talagalay oo af Finnish iyo af Ingiriis ah, iyo qorshe waxqabadka ganacsiga oo tusaale ah iyo dukumeentiyo kale oo tusaale ah.